Home » Travel Associations News » Africa Africa
Septambra 17, 2017
Fantatr'i Afrika ankehitriny fa ilaina ny Brand Africa. Ny Vondron'ny CAF an'ny UNWTO izay eo ambany fitarihan'ny minisitry ny Kenya Najib Balala, ny minisitry ny fizahantany any Kenya dia manana andraikitra hampandroso ity fandaharam-potoana ity.
Ny fotoana izao dia ny famerenana hanoratra ny fitantarana ho an'i Brand Africa satria PMAESA, ny (Ports Management Association of Atsinanana sy atsimon'i Afrika) ary ny «Cruise Africa» ataon'izy ireo dia miangona miaraka amin'ny antso amin'ny Cruise Ship Ports avy amin'ny lafivalon'i Afrika mba hiray hina iray ho an'ny fametrahana an'i Afrika ho làlan'ny sambo fitsangantsanganana tsy manam-paharoa.
Ity kapila ity dia hita ho ohatra iray amin'ny fanasana an'i Afrika hiara-miasa amin'ny fambolena ny mofomamy ho an'i Afrika. "Ny tranga mahamarina ny antso sy ny mahay mieritreritra be" hoy i Alain St.Ange ao Chengdu China nandritra ny fihaonany tamin'ireo minisitry ny fizahantany ao amin'ny kaontinanta.
Ny minisitra Siandou Fofana avy amin'ny Cote D'Ivoire dia maniry ny orinasan-tsambo fitsangantsanganana ary eo amin'ny sisin'ny UNWTO General Assembly ao Chengdu China no nihaonany tamin'i Alain St.Ange, ny minisitry ny fizahan-tany, sidina sivily, seranan-tsambo ary marinina ankehitriny izay mitarika ny Saint Ange Consultancy azy manokana.
Ny fivoriana tany Chengdu dia nanampy an'i Laetitia Mockey, mpanolotsaina teknika Cote D'Ivoire izay miandraikitra ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa ao amin'ny Ministeran'ny fizahan-tany ary Isabelle Anoh talen'ny fifandraisana.
"Mila mampitombo ny indostrian'ny fizahantany isika ary mila ampahany lehibe kokoa amin'ny tsenan'ny fizahan-tany any Eropa" hoy ny minisitry ny fizahan-tany Cote D'Ivoire raha niresaka tamin'ny Alain St.Ange izy momba ny raharaha mifandraika amin'ny fahitana, marketing, fanofanana, famaritana hotely ary fanasokajiana. , ny orinasan-tsambo fitaterana an-dranomasina sy marina marina yacht ankoatry ny hafa.
Cote D'Ivoire dia fantatra fa mpamokatra lehibe indrindra ao Cacao ary mpamokatra kafe be dia be koa, ary voanjo miaraka amin'ireo vokatra maro hafa. Saingy manana teboka fivarotana maro tsy manam-paharoa ihany koa izy ireo, izay tokony hahatonga azy ireo ho toerana fizahan-tany lehibe amin'ny kaontinanta Africa, ary nilaza izy ireo fa vonona hanomboka amin'ity dia ity izao.
"Tsara ny jono goavambe miaraka amin'i Cote D'Ivoire mitazona firaketana ho an'i Marlin" hoy ny Minisitra rehefa nikasa ny hametraka an'i Cote D'Ivoire mafy amin'ny sari-tany fizahantany any Afrika izy ireo.
Alain St.Ange of Saint Ange Consultancy dia mikasa ny hanao fitsidihana zava-misy any Abidjan izay hisy ny adihevitra bebe kokoa momba ny fiaraha-miasa
Alain St.Ange dia manatevin-daharana ny hetsika SUNx .: "Fitsangatsanganana misy fiantraikany tsara ho an'ny planeta mangatsiaka kokoa"
Indonezia mahafinaritra: Lahatsary tsara indrindra ao amin'ny UNWTO General Assembly